Ceni : “Misy ny fifamonoan’ny samy mpombana kandidà” | NewsMada
Ceni : “Misy ny fifamonoan’ny samy mpombana kandidà”
Manomboka tsy milamina. Misy fifanjevoana sahady any amin’ny fampielezan-kevitry ny kandidà amin’izao fifidianana izao. Nitondra fazavana momba izany ny eo anivon’ny Ceni.
“Anisan’ny fitarainana voaray ny fisian’ny fifamonoana na ady eo amin’ny samy mpomba ny kandidà eny amin’ny toerana fanaovana fampielezan-kevitra.” Io ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, ny fizotran’ny fampielezan-kevitra amin’izao fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna izao. Eo koa ny fandrovitana peta-drindrina, na fandotoana na fanindriana izany.
Ny amin’izay tsy fanarahan-dalàna izay, andefasana sy anomezan’ny Ceni toromarika ny solontenany any amin’ny rantsa-mangaikany avy. Araka ny lalàna: anjaran’ny Ceni ny mandamina ny toerana sy ny fotoana anaovana fampielezan-kevitra, raha misy ny fifanindriana na fifanitsahan’izany.
“Iangaviana ny tompon’andraikitry ny kaominina na ny faritra handamina izay toerana sy hanoro mazava izay toerana azon’ny tsirairay hanaovana fampielezan-kevitra”, hoy izy. Nentaniny koa ny kandidà sy ny mpanohana azy hanao ny fampahafantarana 48 ora mialoha ny hanaovana fampielezan-kevitra any amin’ny solontenam-panjakana sy ny Ceni. Hahazoan’ny fanjakana sy ny Ceni ary ny kaominina manao ny fandaminana tsy hisian’ny fifamonoana sy ady saritaka eny am-panaovana fampielezan-kevitra izany.
Mila anaovana fitoriana ny tsy fanarahan-dalàna
“Misy ny tsy fanarahan-dalàna mifandraika amin’ny lafiny fifidianana”, hoy izy. Mety hiteraka fanalana andaharana ny kandidà na famanoana ny vato azony na fanafoanana ny fifidianana izany. Any amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana, ao amin’ny faritany itrangan’ny raharaha no ametrahana ny fitoriana. Any amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany momba ny ady heloka akaiky indrindra kosa ny fitoriana amin’ny fandikan-dalàna na ady heloka, raha misy, ohatra, ny fandrarana na fanalam-baraka, ny fandrovitana peta-drindrina…
Na izany aza, raha lavitra ireo toerana na fitsarana roa ireo: afa-mandray ny fitoriana amin’ny alalan’ny rantsa-mangaikany ny Ceni hatrany amin’ny fokontany, ny kaominina, ny distrika, ny faritra, ary ny faritany. Izy indray no mampita izany any amin’ny fitsarana mahefa momba ny raharaha.
Hatreto, tsy mbola nisy fitarainana an-tsoratra voarain’ny Ceni, fa mbola am-bava sy antso an-telefaonina avokoa.